सल्यानकि उजेलीको अँध्यारो कथा: विदेशबाट पैसाको सट्टा छोरो बोकेर फर्कनुपर्‍यो [नालीबेली]	Postpati – News For All
सल्यानकि उजेलीको अँध्यारो कथा: विदेशबाट पैसाको सट्टा छोरो बोकेर फर्कनुपर्‍यो [नालीबेली]
पोष्टपाटी २०७६ मंसिर १५,आईतवार प्रकाशित पढ्न लाग्ने समय : ८ मिनेट
मङ्सिर १२, काठमाडौँ । तीन वर्ष विदेशको, अनि १२ महिना नेपालको बास । परिवार त के, गाउँ नै देख्न पाएकी छैनन्, उनले ।
उजेलीलाई लिन डिल्ली सल्यानमै पुगे । न त उजेलीसँग पासपोर्ट थियो, न अरु कागजात र पैसा । डिल्लीले पासपोर्ट बनाउन सल्लाह दिए । उनी पासपोर्ट बनाउने तयारीमा लागिन् । तर, उनलाई सोचेजस्तो सहज भएन । कर्मचारी सबैले सोध्न थाले – तपाईँलाई किन चाहियो पासपोर्ट ? कुन देश जानुहुन्छ ? उजेलीलाई गाह्रो भयो ।
‘जेलको चिसो र अँध्यारो कोठामा आमा छोरालाई बस्न कति गाह्रो भयो, यो पीडा कसरी पोखूँ ?’ आँखाभरि आँसु पार्दै उजेलीले भनिन् । जेलभित्र उजेली जस्तै धेरै महिला थिए । तर नेपाली चेली चहिँ उजेली मात्रै थिइन् । साँझ बिहान खाना त पाइन्थ्यो, तर खान मन लाग्दैनथियो ।
‘बाहिर भित्र हिँड्छ, कहिलेकाहीँ ती काला दिनहरुलाई सम्झेर रुँदा उ मेरो मुखमा हेर्छ, अब त मेरो सहारा नै होला’, उजेलीले खुइय सुस्केरा हालिन् । यो खबर इन्द्रसरा खड्काले उज्यालो अनलाइनमा लेखेकी छन् ।